नेपाल आज | हाम्रा मेयर कस्ता छन् ? आरती उतार्ने जस्ता छन्
हाम्रा मेयर कस्ता छन् ? आरती उतार्ने जस्ता छन्
बुधबार, १८ बैशाख २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका बारेमा परारकै बर्खाको समयमा हेल्लो सरकारमा गुनासो गर्दै एक व्यक्तिले प्रश्न गरे, ‘विद्यासुन्दर शाक्यलाई चिडियाघरमा राखेर टिकटमा हेर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्‍यो सरकार !’ यो आक्रोशमा मेयर शाक्यको मानमर्दन पनि देखिन्छ । तर हेल्लो सरकारका कर्मचारीले जवाफ फर्काए, ‘तपाईंको गुनासो वन र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।’
मेयर शाक्य पछिल्लो पटक खुलामञ्च भाडामा दिएको भनेर विवादमा आए । काठमाडौं महानगर स्रोतको दृष्टिले समृद्ध निकाय हो । ठूलो रकम खर्च गर्न नसकेर शाक्यले पैसा बैंकमा मुद्दती खातामा राखेर ब्याज खाने गरेको पनि खुलासा भयो । मुद्दती खातामा पैसा राखेको त हो, फजुल खर्च गरेर सिध्याएको होइन भन्नेहरु पनि हुन सक्छन् । तर आर्थिक मामिलाको कखरा जानेकाहरुका अगाडि यो मामिला ठूलो कुकर्म हो । सरकारी निकायले पैसा ढुँडी पारेर राख्नु भनेको विकासको गतिमा डिस्क ब्रेक नै लगाउनु हो । किनभने पैसा उत्पादन वृद्धि हुने काममा लगाउनु पर्छ । त्यसो हुन सक्दा उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ । रोजगारी वृद्धि हुन्छ । आयात हुँदै गरेको वस्तु स्वदेशमै उत्पादन भयो भने आयात निरुत्साहन गर्न सजिलो हुन्छ । तर हाम्रा मेयर कस्ता छन् भन्दा आरती नै उतार्नु पर्ने खालका छन् ।
मेयर शाक्यका अब केही विशेषता पढौं
–उनी आफैंले दिएको अन्तर्वार्ताअनुसार उनी टिभी हेर्दैनन् । रेडियो सुन्दैनन् । अखबार पढ्दैनन् । अनलाईन सर्फिङ पनि गर्दैनन् । (बुझ्नु पर्‍यो कि उनी देश र समाजको खबर आफ्नै आसोपासेबाट बुझ्छन् ।)
– मेयर शाक्यको भनाइअनुसार देशमा ओली सरकारले सिण्डीकेट अन्त्य गरिसक्यो । अब यातायात क्षेत्रमा प्रतिस्र्धात्मक व्यवस्था लागू भइसकेको छ । (काठमाडौंमा यात्रुलाई खसीबोका भन्दा तल्लो स्तरमा राखेर यात्रा गराइन्छ । )
– त्रिपुरेश्वरमा महानगरपालिकाको कार्यालय रहेको भवन ऐतिहासिक होइन । यो हरिहर भवन पनि होइन । यसलाई भत्काएर अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर नयाँ भवन बनाउनु पर्छ भन्ने मेयर शाक्यको चट्टानी अडान हो । उनी सो भवन पुरातात्विक महत्वको हो भन्नेहरुलाई सत्रू देख्छन् । अरुले ‘सम्पदा हो नमासौं’ भन्दा उनले कसैको सुनेनन् । अहिले सर्वोच्च अदालतले सो भवनलाई पुरातात्विक नै ठहर गरेर नभत्काउन आदेश दियो । तर हाम्रा मेयर कस्ता छन् ? आरती नै उतारौं जस्ता छन् ।
–रानीपोखरीलाई स्विमिङ पुल झै बनाउने उनको अकिञ्चन इच्छा थियो । भूँइमा टायल बिछ्याउने, वरपर रेष्टुरेन्ट, शौचालय आदि राख्ने उनको मनसुवा पूरा हुन पाएन । उनको हठले २ करोड ६० लाख डुब्यो । तर पनि मेयर शाक्यमा हिनताबोध छैन । अहिले पनि उनी के ठान्छन् भने महानगरको विकास ठप्प पार्ने उपमेयर हरिप्रभा खड्गी हुन् ।
–हनुमान ढोकालाई छेक्ने गरी गोजीमा टन्न दाम हुने महर्जन एसोसिएट्सले अग्लो भवन बनाउन खोज्यो । मेयर शाक्यलाई बडो पिर पर्यो । उनले महानगरबाट व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी भवन निर्माण मापदण्ड पास गरिदिए । तर सहरी विकास मन्त्रालयको मापदण्डसँग जुधेपछि मेयरको योजनामा टोर्नेडो पस्यो ।
– मेयर शाक्यका सबैभन्दा प्रिय कर्मचारी हुन् महानगरका ज्ञानेन्द्र कार्की । खुलामञ्ज भाडामा दिने पनि कार्की नै हुन् । यस्तै मान्छे मेयर शाक्यलाई प्रिय लाग्छ । खुलामञ्चको सटर किन नभत्काएको भनेर सोध्दा उनले भने, ‘हरिप्रभा खड्गीले अनुगमन रिपोर्ट नदिएका कारण हटाउन सकिनँ ।’ त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा खुलामञ्चमा डोजर चल्यो । जस लिन शाक्य अघि सरे । सोझासीधा मानिसहरुलाई ‘मेयर शाक्यले गरे पहिलो क्रान्तिकारी काम’ भन्ने भ्रम पर्‍यो । केशव स्थापितले भने मुखै फोरेर भने, ‘खुलमञ्च बलात्कारमा परिरहेको छ । के को अनुगमन रिपोर्ट ?’
– वर्षभरी नै मेयर शाक्य सम्पदा मास्ने मेयरका रुपमा आलोचित भइरहे । तर यिनलाई खास फरक पर्दैन । किनभने यिनी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई नै टेर्दैनन् भन्ने खबर छ । बाँकीलाई यिनले टेर्न आवश्यक पनि भएन ।
– चुनाव जितेमा एक सय दिनमा गर्ने १०१ कामको सूची केशव स्थापितलाई लेख्न लगाए । स्थापितले पनि लेखिदिए । सय दिन त्यसै कट्यो । पछि भन्न थाले ‘त्यो मेरो कार्यक्रम हैन । केशव स्थापितले के के लेखिदियो ।’ त्यही १०१ कामको सूची देखाएर उनले चुनाव जितेका थिए ।
– काठमाडौंमा मोनोरेलको चलाउनु ठूलो आपत निम्त्याउनु हो भन्ने कुरा तथ्यसहित विज्ञहरुले राखेका छन् । तर मोनोरेलको डिपिआर बनाउने जिम्मेवारी शाक्यले दिइसके । उनी त भन्दैछन्, ‘चिनियाँले नै लगानी गर्ने हो । हाम्रो एक पैसा पर्दैन ।’ अमेरिकनहरुलाई व्यापारमा सुताउने चिनियाँहरु त्यति उल्लु होलान्, फोकटमा लगानी गरिदिने ?
मेयर शाक्यका विशेषता राम्रो वर्णन गर्न कसैले पनि सक्दैन । अझ उनमा अहिले अर्को आत्मविश्वास पनि छ । अर्को चुनावमा हरिप्रभाको वडाबाट हरिप्रभाले भन्दा बढी मत आफैले पाउने । काम गर्ने बेला मेयर शाक्यको ध्यान अर्को चुनावमा गइसकेको छ । अब बुझौं हाम्रा मेयर कति दूरदर्शी छन् त ?